Resaky ny mpitsimpona akotry : nitady toko ka sendra vato | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : nitady toko ka sendra vato
Fomba tsy hitenenana hoe nitady fialan-tsiny ka nifanindra tamina fahafatesana nahazo nararaotina. Tsy maintsy noraisina haingana angamba ny fanapahan-kevitra fanendrena ny Filohan’ny HVM Andriamatoa Rivo Rakotovao ho mpikambana ao amin’ny Antenimieran-doholona. Tamin’ny 11 Oktobra no nosoniavin’ny Filohan’ny Repoblika ny fanendrena azy sy ny fanalana azy amina minisitra azy noho izay, tamin’izany koa no tapaka sy vita sonia ny fanendrena ny mpandimby toerana azy. Tsy nety loatra angamba no nisehon’izany alohan’ny fisokafan’ny fitaom-pivorian’ny parlemanta, mazava loatra mantsy ny tetika ao ambadik’izany ka mety ho nanelingelina an’Andriamatoa Filohan’ny Antenimieran-doholona ankehitriny. Ny Filohampirenena anefa tsy maintsy handeha ho any Italia. Nandrasana ny faha-17 ny volana vao navoaka ampahibemaso ireo fanapahan-kevitra ireo. Ny fitrangan’ny fahafatesan’ny Filoha Albert Zafy hono no antony nampihantona ny fanambarana. Sao dia lainga sanatria, roa andro aty aoriana anie vao niseho ilay fahafatesana ! Tsy menatra ve dia hanararaotra fahoriana hahafahana hialana soketa. Na any an-tampony any aza dia miseho matetika ny toy izany ka lasa azo atao hoe ny lala-fizotra dia ny tsy fisian’izany fadifady izany. Asa na ireo olona nihaonana sy nifanakalozan-kevitra tany Italia aza ve dia voafitaka be ihany. Ilay olona niray dia tamin’ny filoha nanatanteraka iraka amin’ny minisitry ny fambolena dia efa naato tamin’io andraikitra io.
Karazana akamantatra ny hafatra mifono ao anatin’
ireto fanendrena roa sosona ireto. Maro no mihevitra fa tsy fampihemorana an’i Rivo Rakotovao eo amin’ny laharam-boninahitra sy andraikitra ankinina aminy no miseho, fa santatra ambavarano fotsiny io fanendrena azy ho senatera io, mbola ho avy ny manetsabe amin’ny dingana manaraka. Inona ny toerana ambony kokoa afaka iandrandrany ? Izay ny akamantatra voalohany. Ny faharoa kosa dia miainga avy amin’ny efa niseho, rehefa tia hanao fihantsina ny fahavalony ny tompon’andraikitra ambony iray dia ny naman’io olona io fahiny no aderaderany
amin’ny fanomezana toerana an’ity niampita rano ka nahita tany lemaka sy ahitra maitso. Ny minisitra vaovao ao amin’ny Fambolena tsy vahiny ao amin’io minisitera io. Iza ary ny patany tamin’izany ? Mpirafy amin’ny patany vaovao ingahindrina teo aloha. Samy nahita daholo ?